Complication and treatment for gall stone – My Doctor
Complication and treatment for gall stone
သည်းခြေမှာကျောက်တည်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အခါ လူနာတော်တော်များများ ပြောလေ့ရှိတာက ” မခွဲခြင်ဘူးနော် ဆရာမ” ” မခွဲဘဲပျောက်အောင်လုပ်ပေးပါ” ” ခွဲရမယ်ဆို ဆက်မကုတော့ဘူးနော် ဆရာမ” လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
သည်းခြေကျောက်ကမကုဘဲထားရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ခွဲစိတ်တာအပြင်အခြားမရှိတော့ဘူးလား? ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ သည်းခြေကျောက်ဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ဗိုက်ထဲမှာရှိနေပေမယ့် မနာမကျင် ဒုက္ခမပေးတတ်ပါဘူး။ သည်းခြေကျောက်ဟာ သည်းခြေပြွန်ကိုပိတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့
၁)ရေတိုသည်းခြေအိတ်ယောင်ယမ်းခြင်း ဖြစ်စေပြီး အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်န်ုင်ပါတယ်။
_ ချက်အပေါ်နား ဗိုက်အလည်တည့်တည့်မှာ အရမ်းစူးပြီးအောင့်တာ တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂) အသားဝါတာ၊ မျက်လုံးဝါတာ
၅) မုန့်ချိုအိတ်ယောင်ပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင်ဗိုက်အောင့်တာ
၆) နာတာရှည် သည်းခြေအိတ်ယောင်တာ
၇) သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာတွေ အထိဖြစ်န်ုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲတွေအရမ်းများတာမို့ သည်းခြေကျောက်အများစုကို ခွဲစိတ်ကုသရလေ့ရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နေရာမှာ
_ ခေတ်မှီခွဲစိတ်နည်းပညာနဲ့ သေးငယ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုမျိုးလုပ်ပြီး ( Laproscopic Removal) ဗိုက်အတွင်းက သည်းခြေအိတ်ကို အလွယ်တကူဖယ်ထုတ်လို့ရတာမို့ ခွဲစိတ်ရမှာကို အရမ်း ကြီးအကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး ပြသနာမစှိဘူးဆိုရင် ၃ရက်လောက်ဆ်ုဆေးရုံကဆင်းလို့တောင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ခွဲစိတ်ပြီးသည်းခြေအိတ်ထုတ်တာရဲ့နောက်ဆက်တလဲကတော့ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကလည်း ဝမ်းပျော့စေတဲ့အစားအစာရှောင်ပြီးစားမယ် ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါ။
_ ကျောက်ကြေစေတဲ့ဆေးတွေရ်ှပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပဲသောက်ဖို့လိုရင်ဆေးသောက်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဆေးသောက်ရင်တော့ ကျောက်ကြေဖို့ကြာသလို၊ ပြန်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေသိဖို့အတွက် ဆောင်းပါးလေးကိူ မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
admin2	2018-09-06T13:05:38+00:00	September 6th, 2018|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|0 Comments